Ukukhupha i-massager: ukuchasene, iinzuzo, ukuphononongwa. Ukukhupha i-massager ukusetyenziswa kwekhaya.
Gcoba i-massage-isisombululo esisebenzayo sokunyamekela ubuso kunye nomzimba
Ukukhupha i-massage yisisombululo esilungiselelwe ukwenza i-massage edibanisa ukuhlaziywa kwetheknoloji yamandulo kunye neyeza lokunyanzelisa ukunyanzelisa, ngokumalunga nemisebenzi ye-aesthetic isisombululo. Umgaqo ophambili wokuhlambulula umzimba uxhomekeke kwimpembelelo engaguquguqukiyo yempembelelo entle kunye nebizo kwiimpawu. Isetyenziswa kumayeza emzimbeni, ebusweni nangobuso.
Iingeniso zomntu ophuculweyo wocingo:
khuthaza ukondla kwezicubu ezithambileyo, kukhuthaza ukujikeleza kwegazi;
kuqinisa iinkqubo zokuxilisa, ukuvuselela inkqubo yokudibanisa iipompo ezinamafutha;
libhubhisa i-cellulite granules, "isusa" iifibercles kunye neenhlawulo esikhumbeni;
kuphucula ukusetyenziswa kwenkqubo ye-lymphatic, ukuququzelela ukususwa komkhuhlane kumzimba;
kuphucula ukuhambelana kwezixhobo ezisebenzayo zokuncedisa i-massage;
ivuselela umkhiqizo we-collagen, ovuselela ulusu kunye nokuthintela kakuhle amanqaku atyulayo.
Ukutshatyalaliswa kokwenza i-massage ye-vacuum:
ukukhulelwa, i-lactation, izifo zentsholongwane / izifo ezithathelwanayo kwisigaba esibi;
ischemia, uxinzelelo lwegazi, ukukhubazeka kwemithambo yegazi kunye nentliziyo;
ukuxhomekeka kwi-thrombosis, i-tumors kwindawo yomsebenzi;
indawo engeyona ndawo yemithambo yegazi;
umonakalo kwesikhumba, izifo zesikhumba;
utywala obunzima / ukungafihli.
Ukukhupha i-massul-cellulite massager
I-cellulite yintshintsho ewonakalisayo eyenzeka kwinqanaba elincinci leoli. Ukukhula kwamanani e-fat fat (cell fat cells) kuqala ukucoca imithwalo ye-lymphatic negazi, kubangele ukuphazamiseka kwamanzi kunye nokuphazamisa ukutya okunomsoco. Ulusu lithatha imbonakalo engafanelekanga, luba lukhulu kwaye lubuhlungu. Ukuhlambalaza nge-massage yokucoca ngokuphumelelayo kwaye ngokukhuselekileyo "iphula" iibhulophu ezincinci, zilulaza isikhumba kwaye ziphelise umphumo we "peel orange". Ukuxilwa kwe-Anti-cellulite yokucoca ukucoca umzimba kuyinkqubo engenabuhlungu kunye nenokuthi ikhululekile, ekhuthazwayo ukuba iqhutywe yikhosi - iiseshoni ezingama-20-25 kunye nexesha eli-1 kwiintsuku ezingama-2-3.
Nceda uqaphele: ungasebenzisi ifowuni kwingingqi ye-groin, ngaphakathi kwendlovu kunye namadolo.
Ukukhupha ubuso obuninzi bomntu
Injongo ephambili yempembelelo ye-hardware ukunyuswa kweenkqubo ze-metabolic, ukwanda kwetoni yesikhumba, ukuqhutyelwa kwe-circulation blood, ukupheliswa kwe-infiltration.
ukuma kwe-epidermis, ukunciphisa ithowuni;
i-acne, iimpawu ze-beriberi;
"Gcoba" intambo ebusweni, ubukho besikiti sesibini;
ukwandiswa komsebenzi weengqungqungquthela zokuthunga / izikhumba.
Ngenxa yeseshoni zokuxilisa, i-metabolism ikhawulezileyo, ukuhlanganiswa kwe-elastin kunye ne-collagen kubangelwa, izicubu zigcwele i-oksijini, ukujikeleza kwegazi kulungiswe ngaphandle kokulimala kwiindonga zeempahla kunye nokubunjwa kwe-hematomas. Ukuhlaziywa kwakhona kwemiphumo kunemiphumo ebalulekileyo kwesikhumba esibucayi buso kwaye ngokukhawuleza kunciphisa iingxaki ze-esthétique.
Ukukhupha i-Breast Massager
Iinkqubo ze-hardware-teknoloji zisetyenziselwa kuphela izilwanyana ezinomsoco. Ukuhlalutya imeko yezempilo yebele, kufuneka ufikelele kwiimviwo ze-mammogram kwaye ufumane ukubonisana kwi-gynecologist. Ukucoca ukuxilwa kweentsimbi ezaneleyo zeengxube ezincinci, ukunciphisa / ukwandisa ngaphandle kwonyango kunye nokunyangwa, ulungisa i-asymmetry, isebenza ekuthintela izifo zeentlanzi zamathambo.
Ukukhupha i-massager iyisisombululo esisebenzayo sokusetyenziswa kwekhaya. Kuya kunceda ukujamelana ne-cellulite, ubonakalise isikhumba, ulondoloze ixesha, ukhuphe ukukhathala kwaye ubuyisele isikhumba ukubonakala okunempilo.
Indlela yokufumana isisu esisisigxina?
Ukuxiliswa kwe-Anti-cellulite yesisu
I-Mesotherapy: ukulungiswa kwemifanekiso
Iintlobo ze-bikini-design okanye indlela yokumangalisa umthandayo?
Iingcebiso kwabangaphandle malunga nokufundisa umntwana wakho nendlela yokuphendula kubo
Iingcebiso ezifanelekileyo malunga nokutya kwabasetyhini abakhulelweyo
Indlela yokunciphisa umzimba ngokufanelekileyo kwaye ungabi ngcono?
Umfazi angakhuli njani ixesha?
Ukufunda Ngaphandle: Imfundo ePhakamileyo
Indlela yokuyeka ukutshaya umfazi okhulelweyo
I-muffins ye-chocolate nge-cream kunye ne-cherry
Hlala ngokuvisisana nesiqhelo sendalo
U-Alla Berger wachaza ngomtshato osondeleyo kunye no "bachelor" uAlexei Vorobiev
Isisu esiqinileyo: izizathu kunye nonyango
Ifayile ye-tilapia kwi-batter